लेटर अफ क्रेडिट कारोबार कसरी गर्ने ? के के चाहिन्छ ? – Banking Khabar
लेटर अफ क्रेडिट कारोबार कसरी गर्ने ? के के चाहिन्छ ?
रमेशकुमार पोख्रेल, बैंकिङ खबर / प्रतितपत्र कारोवारमा आवश्यक कागजातहरु : प्रतितपत्र कारोबार कागजातमा आधारित कारोबार भएकोले विभिन्न प्रकारका कागजातहरुको आवश्यकता पर्दछ । प्रतित पत्रको लागि सम्वन्धित देशको नियमले निर्देश गरेका कागजातका अलावा सामान्यतः निम्न कागजातहरुको आवश्यकता पर्दछः